Gu Fang Bu Zi Shang - Innocent Single - Wattpad
1.7K Reads 341 Votes 25 Part Story
By white_neesan Ongoing - Updated4days ago
"မိန်းမတစ်ယောက်က ရိုးအ​လေ ပိုအဖိုးတန်လေ" ဆိုတာ ပိုင်ဖိန်းထင် လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့စကား...သူမကကျင်းအန်းဝမ်​အိမ်​​တော်​က အစေခံမ​လေးတစ်​​ယောက်​ ဒါမယ့်​ ကြွယ်​၀မှုက  တခြားအမျိုးသမီးတွေ အကုန်လုံးနီးပါးထက်ကို သာလွန်​တယ်​...ရုပ်ရည်အရ ရွက်ကြမ်းရေကျိုမိန်းကလေးတစ်ယောက် ဒါမယ့်​ ပညာနဲ့ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကတော့ အမျိုးသားတွေထက်ပင်သာလွန်တယ်​
ချူးပေ့ကျယ်? သူ့လိုရန်သူ့စစ်သူကြီး တစ်ယောက်ကိုမှ သူမချစ်​မိသွားခဲ့တယ်​...အာဏာနဲ့ အချစ်​ ကြားထဲက တစ်ခုကို သူမရွေးချယ်ဖို့ အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ...​ရွေးချယ်​မှုအတွက်​ မျှော်​လင့်​တာ သူမထင်​သလို သူ့အချစ်​​တွေ မ​လေးနက်​​နေပါ​စေနဲ့လို့​ပေါ့
ပရိယာယ်​ဥာဏ်​များလွန်းတဲ့ သူတို့၂​ယောက်​ကြားမှာ ဘယ်​သူက ​ထောင်​​ချောက်​ဆင်​နိုင်​ပြီး ဘယ်​သူက ​ကျော့ကွင်းမှာ ဆင်းသက်​သွားမိမလဲ
Eng Translator: Chinatown KM
အခန်း (၆) Part 1
အခန်း (၆) Part 2
အပိုင်း (၈) Part 1
အပိုင်း (၈) Part 2
အပိုင်း (၁၀) Part 1
အပိုင်း (၁၀) Part 2
အပိုင်း (၁၁) Part 1
အပိုင်း (၁၁) Part 2
အပိုင်း (၁၃) Part 1
အပိုင်း (၁၃) Part 2
Get notified when Gu Fang Bu Zi Shang is updated
#1 in advisory See all rankings
7.9K 4.3K 137
ကောင်းကျိုးမပေးသော သမီးပျို 	မူရင်းစာရေးဆရာ	- North Night 	မူရင်းဝတ္ထု		-The Good for Nothing Seventh Young Lady 	ဘာသာပြန်	-NEVER 	 	စာမြည်း 	 	၂၄ရာစုရဲ့ စောရဘုရင်မဖြစ်သော သူမဟာ ဘာကောင်းကျိုးမှမပေးသူ မိဘမဲ့ ငပိန်းတစ်ယောက် ကိုယ်ထဲကို ရောက်လာခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒါတင်မကသေး သူ့အမျိုးတွေက စိတ်မကြည်ရင် မကြည်သလို နှိပ်စက်တာကိုခံရသေးတယ်။ငပိန်းမ သုံးစားမရတဲ့ဟာမတဲ့လား ကောင်းပြီလေ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို အဲ့တစ်သိုက်ကို နောင်တဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲလို့ သိသွားစေရ မယ်။ 	အတွင်းအား၊မှော်အစွမ်းတဲ့လား အတွင်းအားပညာနဲ့မှော်ပညာရပ်ပေါ်မှာ သူမရဲ့ စွမ်းရည်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကို လူရည်ချွန်လေးတွေ မကြာခင်သိလာကြတော့မယ်။ မိသားစုခေါင်းဆောင်နေရာ။ဒဏ္ဍာရီလာ ဇာမဏီငှက်။လိုချင်သလားလို့မေးတယ်ပေါ့။လုံးဝစိတ်မကောင်းစရာက သူမက အဲ့ဟာတွေအကုန် ယူပြီးသွားပြီးသားလေ။ 	ဒါပေမယ့်လည်းလေ ကားမူးတတ်တဲ့ ချစ
5.6K 1.6K 134
"ဆရာ...? အရှင့်မှာ ဆရာရှိတယ်လား...! ဘယ်သူ...? ကျွန်ုပ်တို့လည်း မကြားဖူးရပါလား..."
"ငါ့ဆရာက. . . အယ်...? ဆရာ...? ရှိဇွင်း..! အယ် ငါ့ရှိဇွင်းရော...? ငါ့ရှိဇွင်းကို တွေ့မိကြသေးလား..."
သူတို့ အနီးအနားမှာပင် ရှိနေသော သူမ လက်ကလေးတစ်ဖက် ထောင်ပြလိုက်သည်။ "ငါ ဒီမှာဟဲ့...!"
Myanmar Translation of
"My Master Disconnected Yet Again"
Author - Mrs.Ago
All goes credit to the author.
2K 771 90
ချောင်မိုယွီ နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သူမဟာ ဝတ္ထု ကမ္ဘာထဲရောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ပြီးတော့ ဒီဝတ္ထုရဲ့အမျိုးသားဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီCEOရဲ့ မနှစ်မြို့ခြင်းကိုခံရတဲ့ ဗီလိန်ကောင်မလေးရဲ့ကိုယ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်။
CEOရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ချောင်မိုယွီဟာ ကလေးတစ်ယောက်ကိုပွေ့ထားပြီး CEOရဲ့ရုံခန်းဆီကိုလာပေမယ့် ဒီလူဟာ ဒီကလေးက သူ့ကလေးမဟုတ်လို့ တာဝန်လုံးဝမယူနိုင်ဘူးလို့ပြောလေ၏။
CEO : "မင်းလေးက ရွံဖို့ကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပာဘူး
လော့လော့ : "မာမား သူက ပေါင်ပိန်းရဲ့ဖေဖေမဟုတ်ဘူး ပေါင်ပိန်း သူ့ကိုမလိုချင်ဘူး ဟွန့်!"
I'm just translator
Give full credit to original author and eng sub translator^^
ARC-2(The cold general)AMSTS
1.6K 497 41
သူမက ပူပန်​​ကြောင့်​ကြမှု ကင်းမဲ့တဲ့ ဘဝမှာ  ​နေတဲ့ လှပတဲ့ မင်း​သမီးပါ
​သေခြင်းတရားက ဘယ်​အချိန်​ ဘယ​နေရာက လာမယ်​မှန်းမသိတာ​ကြောင့်​ ဘဝကို ပြည့်​စုံစွာ ​နေဖို့ ​ပြောကြတယ်​
ဘယ်​သူသိမှာလဲ ​နောက်​ကွယ်​က တိုက်​ခိုက်​တာခံရပြီး သူမရဲ့ အတိတ်​ဆီ ခရီးဆက်​ရမယ်​ဆိုတာ
သူမရဲ့ ဘဝက ကုန်​ဆုံးသွားပြီ ဒါ​ပေမဲ့ system​ကြောင့်​ သူမ အခွင့်​အ​ရေးတစ်​ခု ရခဲ့တယ်​
တခြားဘဝမှာ ရှင်​သန်​မလား  or. သူမရဲ့ ဘဝ​ဟောင်းကို ပြန်​သွားပြီး ကျရှုံးမလား
ဒါ​ပေမဲ့ တူညီတဲ့ ​သေခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်​ရမှာပါပဲ သူမမှာ system​နောက်​ လိုက်​ဖို့ကလွဲရင်​ ​ရွေးစရာမရှိဘူး
သူမရဲ့ မစ်​ရှင်​ကလား? ထိန်းချု ပ်​ခံ လူတစ်​​ယောက်​အဖြစ်​ ရှင်​သန်​ရင်း တခြားသူ​တွေရဲ့ ဘဝ​တွေကို ကူညီရမယ်​
21K 4.2K 54
" Evil Monarch  (ကျိုး​ကော့ရှီ) "
Translate by Wai Yan Soe
​မော်​ဒန်​​​ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ နံပါတ်​ ၁ လုပ်​ကြံသတ်​ဖြတ်​သူ
သူ့အလုပ်​မှာ​တော့ ပြိုင်​ဘက်​မရှိ​အောင်​ကို ကျွမ်းကျင်​တယ်​...
သူလက်​ခံတဲ့ အလုပ်​ဟာ မ​အောင်​မြင်​ဘူး ဆိုတာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ ဂုဏ်​သတင်းနဲ့ ​မြေ​အောက်​​လောကမှာ​တော့ သူဟာ
​ကြောက်​စရာ​ကောင်း​လောက်​​အောင်​ကို နာမည်​ကြီးတယ်​ ။
အခု​တော့ သူဂျန်​​မောက်​စီဖြစ်​​နေပြီ ။
ဂျန်​မိသားစုရဲ့ အ​မွေကို​တောင်​ဆက်​ခံခွင့်​မရတဲ့ အ​ပျော်​အပါး ကြိုက်​တဲ့ ၁၆ နှစ်​သား​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်ပေါ့ ။
ဘဝသစ်​တစ်​ခုက​တော့ စခဲ့ပြီ ... ။
သူ့ဘဝကိုသူ့စိတ်​တိုင်းကျ ထုဆစ်​ပုံ​ဖော်​ခွင့်​ရခဲ့ပြီ ။
1.2K 394 52
လွန်ခဲ့သော ခုနှစ်နှစ်က၊ သူတို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးနောက်မှာ သဲလွန်စတောင် မချန်ဘဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူက
အခုတော့၊ သူမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအကြို မတိုင်ခင်မှာ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ ဖိအားပေးခဲ့တာက  သူ့ကို လက်ထပ်ရမယ်တဲ့လေ။
လက်ထပ်မှတ်ပုံတင်တစ်ခုနဲ့ ချည်နှောင်ပြီး သူမကို ကြင်နာစွာနဲ့ သူ့နားမှာ နေစေခဲ့တယ်။
ဒီအချိန်ကစပြီး၊ ဒီ စင်ဒရဲလားလေးရဲ့ ခရီးဟာ စီးပွားရေးလောက ဘုရင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးအဖြစ်နဲ့ စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
Mrs Huo - တည်ငြိမ်သည်၊ နှုတ်ရေးထက်သည်၊ ထက်မြက်သည်။
Mr Qin - ဇနီးကို အဆုံးမရှိ သည်းသည်းလှုပ်သူ၊ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ သမီးလေးအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အစေခံတစ်ယောက်ကဲ့သို့။
Translator Note : ဒါကတော့Baby Piggie ရဲ့ My Youth Began with Him - Volume Three ပါ။
Chapter ၅၀၁ ကနေ ၁၀၀၉ အထိ ရှိပါတယ်။ Chapter စုစုပေါင်းက ၄၅၄၁ ရှိပါတယ်၊ ထပ်တိုး- ၃၇၈ နဲ့ဆို စုစုပေါင်း ၄၉၁၉တောင် ရှိတာပါ ၊ English Translation က 1200 ကျော်အထ
7.9K 2.2K 207
System: Host မင်းရဲ့ကမ္ဘာကိုပြန်သွားချင်လား?
System: ကောင်းပြီ။ မင်းရဲ့ကမ္ဘာကိုပြန်သွားချင်ရင်
System: တာဝန်တစ်ခုတိုင်းမှာ မဖြစ်မနေပါတဲ့တာဝန်ကတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဗီလိန်ကို
ချစ်အောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ဘဲ! ကံကောင်းပါစေ...။
Credit to the author and Eng translator
1.9K 656 57
Original Writer : Ling Yutang
Translated by Ma Hnin Pwint
Rebirth Of ရှင်းဖေး
7.8K 2.4K 163
သူမ မိန်းမတွေတတ်အပ်တဲ့ပညာတွေအကုန်သင်ခဲ့တယ် သူကြိုက်တဲ့အကနဲ့ဂီတကိုလဲသင်ခဲ့တယ် သူကတော့လှည့်မကြည့်ခဲ့ဘူး သူထီးနန်းရဖို့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့တယ် ထီးနန်းရတော့လဲ စစ်မတ်ဖြစ်ပွားလို့ စစ်ရေးသင်ပြီး စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ် သူမပြန်ရရှိလိုက်တာက ဥပက္ခာနဲ့သစ္စာဖောက်မှုတဲ့လား သူမမျက်နှာကိုဖုံးထားရတဲ့အသုံးမကျတဲ့မျက်နှာဖုံးအတွက်နဲ့သူလုပ်ရက်တယ် နောက်ဘဝမှာတော့ဒီသွေးကြွေးကိုပြန်ဆပ်ရလိမ့်မယ်